Nkuchi nke anumanu sitere na webụsaịtị kansụl Jerez | Njem zuru oke
Nkuchi nke anumanu site na webụsaịtị kansụl Jerez
Ọ bụrụ na ị na-eche ịmụta a pusi ma ọ bụ nkịta n'oge ekeresimesi a iji nye ụmụ gị ezigbo onyinye nke Ndị Eze, ị kwesịrị ịma nke ahụ site na Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Jerez Emepụtara ngalaba maka ndị a niile na-eche maka anụ ụlọ onyinyenke Ndi-Eze. Ọ bụ ụzọ dị mma iji mee ka anụmanụ ndị a nwee ụlọ ha ga-ebi na nsọpụrụ, ya na ụfọdụ ndị chọrọ inweta ha.
Ebumnuche nke atụmatụ a bụ igbochi ndị na-enweghị isi ịnweta anụ ụlọ, kamakwa nyere ha aka ịchọta nkịta ma ọ bụ pusi, ha nwere ike ịnabata ya ma were ha laa n'ụlọ n'ọnọdụ kachasị mma, ebe ụmụ anụmanụ ndị a na-abịa na nke ha ogwu ma na aru ike. N'ụzọ nke a, n'oge ekeresimesi a, ọtụtụ nkịta na nwamba, site na weebụsaịtị nke SherryHa ga-enwe ike ịchọta ụlọ azụlite ụlọ obibi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nkuchi nke anumanu site na webụsaịtị kansụl Jerez
ebee ka m nwere ike iku nwamba?
hey choro ezigbo nwamba na obere perch, ciames ma obu angora
Zaghachi ka gilda
conxi ehi ọla ọcha dijo
Achọrọ m ịmụta nwa nwoke ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ onye Peshia
Zaghachi ka conxi toro plata
Ndụ na Gris
Ubi kọfị French dị na Cuba